Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Ay Caawa Wargaysyada Yurub Ka Qoreen Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Xidigaha Lakala Doonayo. - Gool24.Net
Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Ay Caawa Wargaysyada Yurub Ka Qoreen Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Xidigaha Lakala Doonayo.
Kooxaha Yurub ayaa si wayn ugu jira suuqa kala iibsiga waxaana lagu tartamayaa ciyaartoy badan oo ay suurtogal tahay in xagaagan lala kala wareegi doono.
Wararka suuqa kala iibsiga ayaa ah kuwo aad u badan iyada oo xagaagan la filayo in uu noqon doono suuqii ugu kharash garanaynta badnaa maadaama oo ay kooxo badani dagaal ugu jiraan in ay horumar ku sameeyaan kooxahooda.
Haddaba waxaa jira heshiisyo muhiim ah oo lagu dhawaaqay laakiin waxaa la galayaa waqtigii ugu muhiimsnaa ee ay kooxaha Yurub samayn lahaayeen saxiixyadii laga filayay.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo koobnay wararkii caawa ay wargaysyada Yurub ka qoreen xidigaha la kala doonayo iyo horumarka laga sameeyay wada xaajoodyada lagu kala doonayo ciyaartoyda badan.
Kooxaha Manchester City iyo Manchester United ayaa si toos ah ugu dagaalamaya difaaca dhexe ee xulka England iyo kooxda Leicester City ee Harry Maguire kadib markii uu soo dhamaystay UEFA Nations League.( Sky Sports News).
Chelsea fikir kale ka qabta hadda saxiixa Mateo Kovacic oo amaah ugu joogay kooxdeeda kadib markii uu hadda Maurizio Sarri si toos ah diyaar ugu noqday in uu Stamford Bridge ka baxayo.(Evening Standard)
Jurgen Klopp ayaa diyaar u ah in da’yarka kooxdiisa ee Harry Wilson uu fursad u siiyo in uu qayb ka noqdo mashruuca waqtiga dheer ee kooxdiisa Liverpool. (Liverpool Echo)
Adnan Januzaj ayaa bartilmaameed u ahaa kooxda Leicester City waxaana laga diiday dalab €20 milyan yuro ah oo ay bishii January ku doonaysay xidigii hore ee Man United si ay King Power Stadium u keenaan. (Leicester Mercury)
Barcelona ayaa isku daygii ugu danbeeyay u samayn doonta si ay ula soo saxiixato kabtanka kooxda Ajax ee Matthijs De Ligt waxayna Barca wada xaajood la furtay wakiilka De Ligt ee Mino Raiola.(ESPN)
Manchester United ayaa bartilmaameedsanaysa goolhayaha kooxda Tottenham ee Hugo Lloris haddii uu David De Gea xagaagan ka baxo Old Trafford. De Gea waxaa doonaysa kooxdaParis Saint-Germain.(The Sun).
Tababaraha xulka France ee Didier Deschamps ayaa ku dhawaaqay in difaaca xulkiisa iyo kooxda Lyon ee Mendy uu Real Madrid ku biiri doono. (Marca)
Ciyaartoyda kooxda Chelsea ayaa doonaya in Frank Lampard uu noqdo badalka tooska ah ee Maurizio Sarri kala wareegi kara shaqada tababaranimo ee Chelsea. (The Sun)
Kooxda Napoli ayaa £37.35 milyan gini ka bixin doonta xidiga Real Madrid amaahda kag maqnaa ee James Rodriguez si uu dib ugula midoobo macalinkiisii hore ee Carlo Ancelotti.(Corriere dello Sport).
Maurizio Sarri ayaa la filayaa in 24 ka saacadood ee soo socda uu Chelsea ka bixi karo wuxuuna kadib la wareegi doonaa Juventus. ( Sky Italy)
Xidiga kooxda Ajax iyo xulka Netherlands ee Donny Van de Beek ayaa qalbiga gashaday in uu Premier league u dhaqaaqo iyada oo Man Uited ay ilaa hadda tahay kooxda ay suurtogalka tahay in ay la soo wareegi doonto. (talkSPORT)
Kooxda Paris Saint-Germain ayaa aaminsan in ay ku guulaysan karto saxiixa difaaca Ajax ee Matthijs de Ligt haddii ay todobaadkii mushaarkiisa ka dhigaan £350,000 kun gini. ( Independent)
Maurizio Sarri ayaa kooxda Juventus ka doonaya in uu u kaxaysto ciyaartoyda uu Chelsea kula soo shaqeeyay Gonzalo Higuain iyo Emerson. (The Sun)